ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းနဲ့ စီရော်နယ်လ်ဒို နောက်ထပ် ဘယ်လိုစံချိန်တွေ ရယူဦးမလဲ
ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းနဲ့အတူ Cristiano Ronaldo ရယူဖို့ ရှိနေတဲ့ စံချိန်မှတ်တမ်းများ
25 Nov 2018 . 10:43 PM
ပေါ်တူဂီအသင်းရဲ့ နာမည်ကျော်ကစားသမား စီရော်နယ်လ်ဒို Cristiano Ronaldo ဟာ မန်ယူ၊ ရီးယဲလ်အသင်းတို့နဲ့အတူ အောင်မြင်မှုတွေ၊ စံချိန်တွေ အများကြီးရယူနိုင်ခဲ့တာကြောင့် ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းမှာရော အောင်မြင်မှု ထပ်ယူနိုင်ဦးမလားဆိုတာ ပရိသတ်တွေအားလုံးက စိတ်ဝင်စားနေကြတယ်။ အခုလောလောဆယ်တော့ စီရော်နယ်လ်ဒိုအနေနဲ့ ဂျူဗင်တပ်စ်ကစားသမားဘ၀မှာ ဆုဖလား ကိုင်မြှောက်ရခြင်း မရှိသေးပေမယ့် သွင်းဂိုးမှတ်တမ်းကောင်းတွေ ရယူနေပါပြီ။
စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ စီးရီးအေပွဲစဉ်(၁၀)အပြီးမှာ (၇)ဂိုးသွင်းယူခဲ့လို့ (၆၁)နှစ်အတွင်း အဲဒီလို စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ ပထမဆုံးကစားသမား၊ ပြီးခဲ့တဲ့ SPAL နဲ့ပွဲတုန်းကလည်း တစ်ဂိုးသွင်းယူခဲ့တာကြောင့် ပြိုင်ပွဲစုံ (၁၆)ပွဲမှာ (၁၀)ဂိုးသွင်းခဲ့ပြီး ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းသမိုင်းတစ်လျှောက် သွင်းဂိုး(၁၀)ဂိုးကို ပွဲအနည်းဆုံးသွင်းယူခဲ့သူအဖြစ်ပါ စံချိန်ရေးထိုးခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့် ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းမှာ စီရော်နယ်လ်ဒို နောက်ထပ် ရယူဖို့ ရှိနေတဲ့ စံချိန်မှတ်တမ်းကောင်းတွက ဘာများလဲဆိုတာ ပရိသတ်တွေ သိအောင် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် . . . .
Photo:Mirror,Stadium Astro,Goal.com,Getty Images,sportbusinessmag,Hetrik.
ဂြူဗငျတပျဈအသငျးနဲ့အတူ Cristiano Ronaldo ရယူဖို့ ရှိနတေဲ့ စံခြိနျမှတျတမျးမြား
ပျေါတူဂီအသငျးရဲ့ နာမညျကြျောကစားသမား စီရျောနယျလျဒို Cristiano Ronaldo ဟာ မနျယူ၊ ရီးယဲလျအသငျးတို့နဲ့အတူ အောငျမွငျမှုတှေ၊ စံခြိနျတှေ အမြားကွီးရယူနိုငျခဲ့တာကွောငျ့ ဂြူဗငျတပျဈအသငျးမှာရော အောငျမွငျမှု ထပျယူနိုငျဦးမလားဆိုတာ ပရိသတျတှအေားလုံးက စိတျဝငျစားနကွေတယျ။ အခုလောလောဆယျတော့ စီရျောနယျလျဒိုအနနေဲ့ ဂြူဗငျတပျဈကစားသမားဘဝမှာ ဆုဖလား ကိုငျမွှောကျရခွငျး မရှိသေးပမေယျ့ သှငျးဂိုးမှတျတမျးကောငျးတှေ ရယူနပေါပွီ။
စီရျောနယျလျဒိုဟာ စီးရီးအပှေဲစဉျ(၁၀)အပွီးမှာ (၇)ဂိုးသှငျးယူခဲ့လို့ (၆၁)နှဈအတှငျး အဲဒီလို စှမျးဆောငျနိုငျတဲ့ ပထမဆုံးကစားသမား၊ ပွီးခဲ့တဲ့ SPAL နဲ့ပှဲတုနျးကလညျး တဈဂိုးသှငျးယူခဲ့တာကွောငျ့ ပွိုငျပှဲစုံ (၁၆)ပှဲမှာ (၁၀)ဂိုးသှငျးခဲ့ပွီး ဂြူဗငျတပျဈအသငျးသမိုငျးတဈလြှောကျ သှငျးဂိုး(၁၀)ဂိုးကို ပှဲအနညျးဆုံးသှငျးယူခဲ့သူအဖွဈပါ စံခြိနျရေးထိုးခဲ့တယျ။ ဒါကွောငျ့ ဂြူဗငျတပျဈအသငျးမှာ စီရျောနယျလျဒို နောကျထပျ ရယူဖို့ ရှိနတေဲ့ စံခြိနျမှတျတမျးကောငျးတှက ဘာမြားလဲဆိုတာ ပရိသတျတှေ သိအောငျ ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ . . . .